Esi wụnye Motorola gallery ngwa ọ bụla gam akporo | Gam akporosis
[APK] Download na wụnye Motorola gallery ngwa ọ bụla gam akporo ọnụ
Francisco Ruiz | | Ngwa gam akporo, Foto, Motorola
Mgbe obere oge gachara ịkekọrịta gị niile ngwa nke gam akporo ndị ọzọ ejiri rụọ ọrụ nke ndị gam akporo ka ejiri wụnye ma nwee ọ onụ na ụdị ndị ọzọ na ụdị nke ngwaọrụ, taa, mgbe ịkekọrịtarịrị Xperia Z3 Lollipop kiiboodu, ugbu a, m chọrọ ime otu ihe ahụ Motorola's ngwa egwu gallery ngwa.
Ya mere ugbu a na ị maara, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ ụtọ Orolọ Ọrụ Motorola ma obu nke na Motorola gallery ngwa, nke a na-ahụkarị nke dị ka Moto X, Moto G o Moto E 2015, M na-adụ gị ọdụ ka ị gaa n'ihu na-agụ post a, ebe ọ bụ na ịnụ ụtọ ya naanị ị ga-ebudata faịlụ APK dị mfe na ị gaghị mkpa soro mgbagwoju anya na-egbu maramara nkuzi ọbụnadị enweghị ọnụahịa gam akporo gị.
Etu anyị ga - esi ekele ndị obodo gam akporo niile na - akpata ndi otu ndi mmepe XDA, na-enweghị obi abụọ mba ụwa kachasị mma na ihe niile na-ezo aka na sistemụ arụmọrụ nke ekwentị.
1 Kedu ihe ngwa Motorola ọhụrụ na-enye anyị?
2 Olee otú m wụnye Motorola gallery ngwa?
Kedu ihe ngwa Motorola ọhụrụ na-enye anyị?
Ọ bụ ezie na ọ bụ gallery nke na-enwe ọtụtụ ihe yiri ihe dị na foto foto gam akporo dị ọcha na-enye anyị, ngwa gallery a sitere na Motorola, emegharịrị kpamkpam na ihe eji emepụta ihe nke gam akporo Lollipop jiri nlezianya mee ka nlele dị njikere site na igwefoto na mgbakwunye ọhụrụ dị ka nhazi ọkwa site na ụdị ihe omume na oge.
E wezụga nke akara ngosi ngwa ọhụrụ, dabere na atụmatụ ya e megharịrị na Ihe eji emepụta ihe, anyị nwekwara ike ịchọta mgbanwe ndị na-adọrọ mmasị dịka ịnweta ngwa ngwa na ọrụ nke ịkụcha foto na mgbanwe maka arụmọrụ kachasị mma karịa na nsụgharị ndị gara aga nke ngwa ahụ.
Olee otú m wụnye Motorola gallery ngwa?
para wụnye Motorola gallery ngwaDika anyi gosiputara na paragraf nke mbu nke ederede a, igaghi acho uzo aghaghachitere ma obu soro nkuzi nkuzi di omimi iji gbanye udiri faịlụ obula. Ihe ikwesiri ime bu budata APK site na otu njikọ a ma wụnye ya na ụzọ mbụ site na ịpị na ngosi nke nbudata emechara. Tupu, dịka ị maraworị, ị ga-enwerịrị nhọrọ enyere site na nchekwa, iji nwee ike ịwụnye ngwa na mpụga Storelọ Ahịa Play, ma ọ bụ ihe dị otu, ngwa site na isi mmalite.
Budata- Gallery Motorola ngwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » [APK] Download na wụnye Motorola gallery ngwa ọ bụla gam akporo ọnụ
Onye isi dijo
Ọ wụnyeghị na Nexus 4.
Ọ gaghị wụnye na m Nexus 4
Ọ naghị arụ ọrụ na nexus 5. Na 5.1
ọ naghị awụnye na nexus 6 na 5.0.1 ọ naghị arụ ọrụ ma
Zaghachi Andres Guirado
Ọ wụnyeghị na Samsung S5.
Abughi na s4 na CM 12 5.0.2
Zaghachi Brian Martinez
Adighi etinye aka na Motorola Moto G 2013 na LP 5.0.1 GPE
Ezigbo mma, ewezuga na enweghị ike itinye ya na ngwanrọ ọ bụla ma ọ bụ na ọ bụghị nke m.
M na-eji Lg G2 eme ihe, ọ naghị enye m ohere itinye ya, enwere m olileanya na azịza dị.
Agbanyeghị ... Njikọ ahụ anaghị arụ ọrụ, site na ihe m gụrụ, ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ. Nọgide na-eme enyi. 🙁
Zaghachi José Luis Ces Lameiro
anaghi m ahu link
Zaghachi Felipe Londoño
Agaghị wụnye na Nexus 5 na gam akporo 5.0.1
Ikwesiri ime ihe iji tinye ya?
Zaghachi Jordi Cañal Espinosa
Ha anaghị arụ ọrụ na sony xperia C3
ọ gaghị arụnyere na Sony Xperia Z3 compact
Zaghachi Fernando Gonzalez Monsalve
Fewbọchị ole na ole gara aga, azụrụ m Moto G4 ..
O nweghi ụdị moto ihe eji egwu egwu, anwaala m ọtụtụ ụlọ ahịa Play ma ha bụ mgbasa ozi dị ọcha. Can nwere ike ịkọwara m otu m ga - esi wụnye nke mbụ na - enweghị gbanye ya?
Ọ bụ naanị otu na-amasị m ..
Zaghachi na Nahuel
Enwere ike igosi Sony Xperia Z4 na Septemba
Samsung Galaxy Tab A na Tab A Plus gosipụtara ya